← “बाघलाई घांस खुवाउदा के त्यो प्राक्रितिक हुन्छ ?”
को श्रमिक को मालिक ? →
राजनीतिक अधिकार माग गर्दै समलिंगी तेश्रोलिंगी
काठमाडौं, भदौ ३० – कसैप्रति रिस उठेको छ भने समलिंगी तेश्रोलिंगी जस्तो भनेर गाली गरिन्छ । खुलेर आएका समलिंगी तेश्रोलिंगीलाई दुरव्यवहार गरिन्छ । अनि खुल्न चाहने कसरी खुल्ने ? म खुलेर मुर्ख भए । बुझ्नेले मलाई यही समाजको सदस्य भन्लान भने नवुझ्नेले के भन्लान कसरी थाहा हुन्छ र ?